ဝါဒကို အသာထား၊ ကမ္ဘာမြေအပေါ် ရိုးသား - YOYARLAY Digital Media and News
ကျွန်တော်တို့တွေ နေမကောင်းဖြစ်ရင် ဟိုဆေးခန်းပြ၊ ဒီဆေးခန်းပြ၊ ဆရာဝန်ပြကြ၊ ပါရဂူပြကြနဲ့ အလုပ်များကြရတယ်။ လူ့အသက်တစ်ချောင်းဖြစ်ဖို့ ဘယ်လောက်များ ခက်ခဲလဲဆိုရင် လူပြည့်က အပ်တစ်စင်းနဲ့ ဗြဟ္မာပြည်က အပ်တစ်စင်းထိမှ ဖြစ်သတဲ့။ တကယ့်ကို ခက်ခဲလွန်း။ ဒါပေမဲ့ လူသားတွေ ၇ ဘီလျံ မှီတင်းနေထိုင်တဲ့ ကမ္ဘာကြီး နာဖျားတာကြတော့ ဟိုလူ့အပြစ်၊ ဒီလူ့အပြစ် . . . ။ လက်ညိုးတွေ ပြိုင်တူထိုးကြရင်း ပစ်ထားလိုက်ပုံများ . . . ကိုယ်နဲ့ စိုးစိမျှ မဆိုင်တော့သယောင်။
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သမားလို့ ပြောလိုက်ရင်. . . ဟိုလူက မကြိုက်၊ ဒီလူက ဂရုမစိုက်နဲ့။ အော် သူတို့တွေက ကမ္ဘာကြီးရဲ့ ဆရာဝန်တွေပါလေ။ (ဒီလို ဘယ်သူများ တွေးကြပါလိမ့်)။ ဒါဆို ကျွန်တော်တို့ ဘာမှားနေလဲ။
ဒီမေးခွန်းဟာ အခုမှ ထမေးရတဲ့ မေးခွန်းမဟုတ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၅၀ က ပဲ့တင်ထပ်လာတဲ့ မေးခွန်း။ သမိုင်းတစ်ကျော့ ပြန်လည်တတ်တယ်ဆိုတဲ့ ဆိုရိုးစကားမှာ . . . ဖက်ရှင်ကိုပဲ ပြေးမြင်ကြတယ်။ ဒါမျိုးက တို့အဘွားတို့လက်ထက်က ဝတ်ခဲ့တဲ့ အဆင်မျိုးဟဲ့။ ဒီလိုမျိုးလေး ပြန်ဆန်းသစ်လိုက်တော့လည်း ပွဲလယ်တင့်သားပဲ။ ဒါပေမဲ့ ကမ္ဘာကြီးရဲ့ နာဖျားမှု အချက်ပြခေါင်းလောင်းသံတွေကိုတော့ နားစွင့်ဖို့ မေ့နေကြစမြဲ။ အခုတော့ သမိုင်းဟာ New Normal အဖြစ် ပြန်ကျော့။ ကျွန်တော်တို့လည်း Mask ကိုယ်စီနဲ့ ဦးမမော့နိုင်တော့ဘူးလေ။ ဒါတောင် Physical Infrastructure လို့ ကြွေးကြော်လို့ ကောင်းနေဆဲ။ ငါတို့သည် ဘာဝါဒီ၊ ငါတို့သည် ညာဝါဒီ။ အမှန်တော့ ကျွန်တော်တို့သည် အရိပ်နေပြီး အခက်ကို ရှာကြံချိုးမိသူများဖြစ်၏။ ဝါဒကို အသာထားကြပါတော့၊ ကမ္ဘာမြေအပေါ် ရိုးသားကြပါတော့ . . . ဤသို့ အထပ်ထပ်အော်နေသော်လည်း အသံကား မထွက်။ ထွက်သော်ညားလည်း အရေးပေါင်းစုံကြား ဖုံးဖိခံရပြန်လေ၏။ အော် ကမ္ဘာမြေ . . . သင့်အတွက် ဆရာဝန်ကား ရှားလေပြီ။
အ‌ကြောင်းကြောင့် အကျိုးတဲ့။ ကျွန်တော်တို့လူသားတွေက ကမ္ဘာပေါ်မှာ အကြောင်းပြချက် အများဆုံးပဲ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အကြောင်းတရားတွေကို ရှာဖွေ၊ တွေ့ရှိ၊ သုံးသပ်၊ ဆင်ခြင်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ ဉာဏ်ပညာရှိလို့ပါ။ ကမ္ဘာ့ပေါ်မှာ ဉာဏ်ပညာအထက်မြက်ဆုံး . . . ပြီးတော့ အရက်စက်ဆုံး။ ( အော် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်သာ အချစ်ဆုံးဆိုတဲ့ အတ္တတွေနဲ့ပေါ့)။ လူသားတွေရဲ့ အပြုအမူ – ကမ္ဘာကြီးပေါ် သက်ရောက်တဲ့ ဆိုးကျိုး – တန်ပြန်သက်ရောက်မှု ဆိုတဲ့ စက်ကွင်းမှာ ကိုယ်ပြုသည့်ကံ . . . ကိုယ်ထံပြန်လို့ပဲ တဖွဖွ ရွတ်ဆိုနေရမယောင်။ တကယ်တော့ ကျွန်တော်တို့ပြုသည့် ကံ(အလုပ်)က ကျွန်တော်တို့ကိုတင် တန်ပြန်မှာမဟုတ်၊ သား၊ သမီး၊ မြေး၊ မြစ်တွေအထိ ပြန်ဦးမှာပါ။
ကိုယ်ချစ်တဲ့သူတွေကို လက်ဆောင်ပေးရင် ကောင်းကောင်းလေးပဲ ပေးချင်တာပေါ့ . . . . အခုတော့ ကမ္ဘာစုတ်ကြီး လက်ဆင့်ကမ်းခဲ့ရမယ်တဲ့လား။ ရုပ်ဝတ္တုတွေနောက် အမောတကောလိုက်ရင်း ကိုယ်ကျင့်တရားတွေ အရောင်မှိန်မှိန်လာကြတဲ့အခါ . . . သူလည်း မလင်း၊ ကိုယ်လည်း မလင်း . . . ဒါတောင် အမှောင်ပြိုင် ပြိုင်ကြရင်းနဲ့ အခုဆို ကမ္ဘာကြီးဟာ အသက်မျှဉ်းမျှဉ်းလေးပဲ ရှူရှူနေရတယ်။ ဒါဟာ ခင်ဗျားတို့လည်း သိ၊ ကျုပ်တို့လည်း သိတဲ့ အရှိ . . အရှိတရားပေါ့ဗျာ။ ဒီတော့
အယူဝါဒတွေ ခဏမေ့၊ ကမ္ဘာကြီးကို ပွေ့ပြီး
Previous Previous post: ကပ်ရောဂါအတွင်း ဟိုတယ်တွေ သန့်ရှင်းရေး လုပ်ရဲ့လားလို့ အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ ထောက်လှမ်း စစ်ဆေးလိုက်တဲ့အခါ
Next Next post: ခြေတစ်ဖက် ဆုံးရှုံးလိုက်ရပေမယ့် အပြုံးမပျက်ခဲ့တဲ့ သူမ
ပိုင်ရှင်မဲ့ဆိုတဲ့ စကားလုံးက ကျွန်တော်တို့နဲ့ မစိမ်းပါဘူး။ ပိုင်ရှင်မဲ့သစ်၊ ပိုင်ရှင်မဲ့ မူးယစ်ဆေးဝါး၊ ပိုင်ရှင်မဲ့ပစ္စည်း စတဲ့ စကားလုံးတွေထဲမှာ အခုနောက်ဆုံး စကားလုံးတစ်ခု ထပ်တိုးလာပါတယ်။ ပိုင်ရှင်မဲ့ လက်နက်ကြီးကျည်ပါ။ သြဂုတ်လ ၃၁ ရက်က ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း ကျိုင်းတုံမြို့မှာ…
Published: September 2, 20194:55 pm